सबैभन्दा धेरै धन भएका १० अभिनेत्रीहरु: हेर्नुहाेस कसको सम्पत्ति कति ? – Jagaran Nepal
०९ आषाढ २०७८, बुधबार
सबैभन्दा धेरै धन भएका १० अभिनेत्रीहरु: हेर्नुहाेस कसको सम्पत्ति कति ?
Jagaran Nepal बुधबार, आषाढ ०३, २०७७
एजेन्सी । एउटै फिल्मबाट करोडौं कमाउने बलिउडका हिरोइन फिल्मको साथसाथ दोस्रो कारोबारमा पनि जोडिएका छन । जहाँबाट उनीहरुको कमाई हुन्छ । यहाँ बलिउडका सबैभन्दा धनी हिरोइनहरुको बारेमा बताइएको छ । बलिउडमा हालसम्म सबैभन्दा बढी कमाउने तथा सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति जोडेका १० अभिनेत्रीहरु को हुन र उनीहरूको सम्पति कति छ ? आज हामी यो जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौ ।
१, ऐश्वर्या राय बच्चन
सुन्दरताको लागि संसारमा चिनिएकी ऐश्वर्या बलिउडकी सबैभन्दा धनी हिरोइनमा गनिन्छिन् । एक रिपोर्टका अनुसार ऐश्वर्या ३५ मिलियन डलरको मालिक्नि हुन् । आज पनि ठूला घरानाका निर्देशक उनीसँग फिल्म गर्न चाहिरहेका छन् ।
२, माधुरी दीक्षित
९० को दशकमा बलिउडमा राज गर्ने नायिका माधुरी दीक्षित पनि ३५ मिलियन डलरको धनी हुन् । माधुरी आज पनि एउटा फिल्मको ४ करोड लिन्छिन् ।
३, अमिषा पटेल
फिल्म कहो ना प्यार है’ बाट आफ्नो फिल्मि करियर सुरु गरेकी बलिउड अभिनेत्री अमिषा ३० मिलियन डलरको मालिक्नी हुन् । १ सय २५ फिल्ममा काम गरिसकेकी अमिषाको आफ्नै फिल्म निर्माण कम्पनी छ ।
४, प्रिति जिन्टा
प्रिति जिन्टा पनि पैसाको मामलामा कोही भन्दा कम छैनन् । उनको सम्पति ३० मिलयन डलर को नजिक भएको एक रिपोर्टमा जनाइएको छ । प्रिति आजभोलि फिल्मबाट टाढा नै छन् तर पनि पैसाको मामलामा कम छैनन् । अभिनयको अलावा प्रिति पंजाव किंग्स एलेभेन को धनी पनि हुन् ।
५, दीपिका पादुकोन
बलिउडमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने नायिका दीपिका पादुकोण बलिउडकै टप नायिकामा पर्छिन् । २००७ देखि आफ्नो करियर सुरु गरेकी दीपिकासँग २० मिलयिन डलर सम्पत्ति रहेको बताइन्छ ।
६, अमृता राव
बलिउड अभिनेत्री अमृता राव ले धेरै फिल्म भने खेलेकी छैनन् तर पनि सम्पत्ति भने कोही भन्दा कम छैन । उनीसँग २० मिलियन डलर सम्पत्ति रहेको एक रिपोर्टले देखाएको छ ।
बलिउडमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने नायिका मध्ये एक काजोल फिल्ममा भने कम नै आउने गरेकी छन् । तर सम्पत्तिको मामलामा भने धेरै नै अगाडि छन् । काजोलसँग १८ मिलियन डलर सम्पति भएको बताइएको छ ।
८, करिश्मा कपूर
करिश्माले धेरै वर्षदेखि फिल्म खेलेकी छैनन् तर पनि सम्पतिको मामलामा धनी छन् । उनीसँग १२ मिलयन डलर सम्पति रहेको बताइएको छ ।
९, मल्लिका शेरावत
बलिउडकी हट नायिका मध्येकी एक नायिका मल्लिका शेरावतसँग १० मिलियन डलर सम्पत्ति छ । आजभोलि उनी फिल्ममा भने फाट्टफुट्ट मात्र देखिने गरेकी छन् ।
१०, प्रियंका चोपडा
बलिउडबाट हलिउडसम्म आफ्नो अभिनयको छाप छोड्ने अभिनेत्री प्रियंका चोपडा ८ मिलियन डलरकी धनी छन् । उनी फिलमको अलावा विक्षापनमा धेरै देखिन्छिन् ।